Gazette ရွာသူားတွေဆုံကြပါပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » Gazette ရွာသူားတွေဆုံကြပါပြီ
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 12, 2015 in Best Web Awards, Myanmar Gazette, Photography, Travel | 49 comments
ဂဇက်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်သူစါရင်းထပ်ဖြည့်ထားသည် ပျော်နေတဲ့ ကြီးမိုက်
မနေ့က ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက် ၊တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလမ်းက စိမ်းလန်းစိုပြေစားသောက်ဆိုင်မှာ
“မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ နဲ့ မြန်မာ့ ဂဇက် ရွာသူားများတွေ့ဆုံပွဲ”
ကိုအောင်မြင် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါပြီ…လူ၆၀ လောက်မှန်းထားပေမဲ့
ရွာသူားနဲ့ မိသားစုဝင် ၅၈ လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်…
အစားအသောက်တွေက ရောက်ရောက်ချင်း ကော်ဖီ နဲ့ မအိ ယူလာတဲ့ဆင်းဒွစ်ရယ် အာတီဒုံယူလာတဲ့ နှမ်းပြစ်၊ မြေပဲပြစ်ရယ်…
စားကြရင်း အစီအစဉ်တွေကိုတော့ လူစုံအောင်စောင့်ရင်း ၁၀ နာရီမှ စဖြစ်ပါတယ်….
၁၁ နာရီမှာက ကြက်ထမင်းကြော်၊ Fish finger ၊ဆီးဖုတုံရမ်းဟင်းချို ၊ ဆိုင်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဆလက်ခေါ်တဲ့..သီးနှံမျိုးစုံကိုမရိုးနိ နဲ့သုတ်ထားတဲ့အချိုပွဲ..တို့နဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးစားသောက်ခဲ့ကြပါတယ်…
မြန်မာ့ဂဇက် တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်သူစာရင်း
၁။ ကြီးမိုက် + ၂
၄။ Green Rose
၅။ P Cho Gyi + ၂
၇။ အလင်းဆက်(ခ) မောင်သူရ
၁၁။ အာဂ+ နွယ်ပင်
၁၂။ ရွှေတိုက်စိုး + ၂
၁၃။ မင်းသုဝေ +၂
၁၅။ ခိုင်ဇာ (ခ) ခင်ဇော်
၁၇။ ကျောက်စ် + နှင်းနှင်း
၂၀။ တောင်ပေါ်သား (ခ) ကိုမျိုးသန့် +၁
၂၄။ မွသဲ(ခ) TNA +၁
၂၆။ အင်ဇာဂီ (ခ)ဖားသက်ပြင်း+ ၁
၂၇။ ပန်ပန်ချစ် +၁
၂၉။ ချာတူးလန် + ၁
၃၂။ ဝေါင်း (ခ) ၀ိုး (ခ) ၀ါး
၃၅။ မနိုဗွီ + ၂
၃၈။ ရို့စ်မင်း +၁
၄၁။ အမာညို………………………ဆိုတော့ စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူ ၅၉ ယောက်ရှိတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံပွဲထဲ အများဆုံးတက်
ရောက်ကြတာဖြစ်ကြောင်း…..အဲ့ထဲကအချို့ကတော့ကိစ္စရှိလို့ စောစောလာ စောစောပြန်သွားတဲ့အတွက် ဂရုဖိုတိုမှာတော့
အလှူ ပွဲကိုတော့ အဲ့ထဲကမှ ၃၃ ယောက်လိုက်ပါလှူတန်းခဲ့ကြပါဂျောင်း :))
ဂဇက်အမှတ်တရ အင်းကျီ နဲ့ စာအုပ်တွေ
စာပေ နဲ့ ကဗျာဆုများ
သဂျီးနဲ့ ရွာသူား အချို့ပေးပို့သော ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်
အမှတ်တရ စုပေါင်းဓါတ်ပုံ (တချို့ကပြန်သွားကြပါပြီ)
ဂဇက်ရွာသူားများ ဂုဏ်ပြုဆုကို လက်ခံရယူနေသူ ဘေဘီမိုက်။
အဲဒီအခမ်းအနားပြီးတော့ ရွာသူားတွေထဲက လိုက်နိုင်မဲ့သူတွေစုပြီး
သန်လျှင် သဘာဝတရားရိပ်သာ ကို အလှူအတွက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်….(စုစုပေါင်း ၃၃ယောက်လိုက်ပါတယ်)
မြန်မာ့ဂဇက် ရွာသူားမျာနဲ့ အများကောင်းမှုအဖြစ် သိန်းရှစ်ဆယ်နဲ့ လေးသောင်းတိတိ လှူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်….
အလှူ သို့လိုက်ပါခဲ့သူများနှင့် VOA မှသတင်းထောက် ဦးရော်နီငြိမ်း တို့အမှတ်တရ
အလှူ ငွေနဲ့အတူ ဦးကြောင်ကြီးရဲ့နာရီဆုကိုလည်းလှူ ခဲ့ပါတယ်
ဒါကတော့ ကျုပ်မှာရှိသလောက်ပုံလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ဆုပေးပွဲ၊ အလှူ ခရီးစဉ်အကြောင်းလေးပါပဲ
၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၅
ပျော်စရာ၊ ရွှင်စရာ၊ ဝမ်းတာစရာ
အင်း .. အမှတ်တရ နေ့ရက်တစ်ခုဘာဘဲ အုတ်ကထဂျီးရေ …
အဲ့ဒါ လာပြောဒါ ….
.စောစောစီးစီး ကွန်မန့်ပေးသွားတာ သင့်ခရုပါ အံစာရေ..
.ကိုယ့်မှာ ဓါတ်ပုံသိပ်မရှိလို့ နီ တို့တွေလည်း ကိုယ့်ဗားရှင်းနဲ့ ကိုယ်တင်စေချင်တယ်ကွ :))
ဘေဘီမိုက်ကလေးက အပြင်မှာ ပိုပြီးဖြူဖြူချောချောလေးပါဗျို့…
ရွာထဲ ဒါ့ပုံမစားတဲ့ နှစ်ယောက်က လူမိုက်ကခင်ဇော်ရယ် ဘေဘီမိုက်ရယ်…
ကခင်ဇော်လဲ အပြင်မာပိုဝ အဲလေ.. အိုက်လောက်မ၀ပဲ အလှစားလေးမို့ တညင်မှာ စပွန်စာပေးချင်သူဒွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ခဲ့ဂျောင်းကို မွသဲက တင်ပြမယ်ကြောဒါပဲ
ဟိဟိ မကြာမီတင်ပြနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည့်အကြောင်းနဲ့ ခင်ဇော့်အလွဲလေးဒေထပ်စုလိုက်အူးမယ် ကိကိကိ ၁၅၀၀ တခု ၇၀၀၀ တခု ခိခိခိ
ဓာတ်ပုံကတင်ချင်တယ်… ကင်မရာက သိပ်မကောင်းတော့ မတင်ချင်တာ…
ဟုတ်… ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ့မယ်… ဥက္ကဌကြီး…
.ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ကြည်နူးပါဘိတော့။ ကျောက်စ်ကလည်း သိပ်ချော သိပ်ခန့်နေပါလား။ ပွဲကတော့ လူသိပ်မစည်ဘူးနော်။ အဲဒါ သဂျီး က ကိုဘေးနွားကင် အကောင်လိုက် မပို့လို့ ဖြစ်တာ။ ကိုဘေးနွားကင်ဆိုတာ သာ ပို့ရင်တော့ မရောက်အရောက်ကို လာစားဦးမှာ။
.ကျုပ်က မပြုံးကိုလာစေချင်တာ… လူသိပ်တော့မနဲပါဘူး..၅၀လောက်လာပါတယ်..တချို့ကိစ္စရှိလို့စောပြန်
.တချို့ ပွဲပီးခါနီးမှရောက်…ကျုပ်ဓါတ်ပုံကလည်းမစုံပါဘူး :))
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်း
စုံပါတယ်… အန်တီဝင့်ပြုံးမြင့်ရယ်… ဆူးရယ်… အန်တီရယ်… ဒေါ်စနိုးစမိုင်းလ်ရယ်… မနောဖြူ ရယ်…ကိုဆာရယ်… ကိုပေါက်ရယ်… လရိပ်ရယ်… မြတ်ပုလဲဖြူ ရယ်… အန်ကယ်ကြီးရယ်…ကမ်းကြီးရယ်… ကိုစစ်ရယ်… သိသလောက် အဲလူတွေ မလာပါ… အနော်က လာပါ့.. အန်တီကို တွေ့ချင်လို့ စောင့်နေတာ အနော်ပါတယ်ဗျ… စောပြန်တာ.. တော်တော်များတယ်.. ဆောရိုး.. မောင်ဘလှိုင်.. အောင်မိုးသူ.. အနော် … ဟဲ… တော်တော်ကို လာကြပါတယ်… ချာတူးလန် ကတော့ အမှတ်တရပဲ…
အန်တီအေးလဲ မလာဘူး ….
ဒီအလှူက ဘယ်ကဘယ်လို သိန်း၈၀ကျော်သွားသလည်းမသိ..။
မြင်ချင်နေသူတွေ မြင်လိုက်ရလို့.. ၀မ်းသာ…။
ကိုရော်နီက.. ဘယ်ကဘယ်လိုပေါ်တော်မူလာသလည်း.. တွေးမရ..။
မနက်ဖြန်တော့.. မစိုးယုဝေတို့စုံတွဲနဲ့ အယ်လ်အေတွင်တွေ့မည်ဖြစ်ပါ၏..။
Miss Universe မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်အတွက်.. ဤပုံများကို ပြလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း…
VOA ဝိုင်းတော်သားတွေ အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန်မှာ..အဲဒီနေရာကို ရောက်ရှိနေတယ်.. ။
အင်တာဗျူးတွေလည်း လုပ်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်… ။
သတင်းယူနေတာ နေမှာပေါ့… ။
သများးးက ဓာတ်ပုံ စားးးဘူးးးး
တခြားးးဟာတွေ စားးးနေရလို့ စားးးပိုးးးးနင့်ရောပဲ
– စကားမစပ် ..အဲ့ကီလားဆိုဒ်မှာ အော်လွန်ဒိုဘလွန်းက မန်ဘာ တဲ့လား..အံ့ဖွယ် .. အငိငိ
ကျနော်တောင် ဒီရွာထဲ ရှိနေတာပဲဟာ
.ဒါနဲ့ ဒီဂ မမဂျီးဟာ . . .
သက်မွန်မြင့်ထက်တောင် သက်မွန်မြင့်နဲ့ ပိုတူသေး
ကရင်မောင် ရေ ဒဲ့မာ ဒါ့ပုံ တွေ စလာပြီတော့။
အခု အသ်အသ်ချင်ဆုံး ကလေ
ဂလုပုံ တွေ ထဲ အထုတ်ကြီး တစ်ပွေ့ပွေ့ နဲ့ ဟာ ဘူတုန်း။
ကျောင်း ရဲ့ လိုဂို စာထဲမယ် စွန့်လွှတ် ပါ ရှိုဒါ ကို တူဂ ပိုက်ထားရယ်။
ဘေဘီမိုက် ကလေး က တကယ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းလှပါသကော ကကြီးမိုက်။
အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်တဲ့ သမီးကောင်းလေး မို့ ဂုဏ်ယူချင်သလောက် ကို ယူလိုက်စမ်းပါရှင်။
ကျန်တဲ့ ပုံများ စကားသံများ ကို လဲ မျှော်နေဆဲ။ :))
.အမှန်ပဲ ခင်ဇော်ရေ…ညီးက အခြားဟာတွေအကုန်စားလို့ ဓါတ်ပုံမစားတာ…ခိခိ :sar:
.အရီးမုတ်ဆိတ်ရေ..အဲ့ဒါ ငွေထုတ်လေးလွန်းလို့ လူမနိုင်လို့ သဂျားမင်း ဆင်းမခိုင်းထားရတာလေ :))
တူရို့က လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးမှ လှူတာကိုး
(အဲ့ အချိန်မှာ ကျနော့်ကို မျက်စိအောက်က ကို အပျောက်မခံကြဘူး)
မြန်မာပုလင်းပုလေးတွေကိုင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကိုဘလက်ကြီးတင်ပေးပါအုံးဗျာ
ထမင်းကြော်..ငါးလက်ချောင်းကြော်.. အသီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိ.. မှတ်မိသူများမစပါ.. :))
.အသီးအနှံကတော်တော်စုံပါတယ်…ငှက်ပြောသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ ဖရဲသီး၊ ပန်းသီး
တွေကို အတုံးလေးတွေလှီးပြီး မရိုးနိနဲ့နယ်ထားတယ်ထင်တာပဲ..စားလို့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်
လုပ်ပြန်ပြီ အုတ်ကထဂျီးကတော့ ….
ဟိုစာရင်းထဲမှာလည်း ကျုပ်က အောက်က
အခု စာရင်းထဲလည်း ကျုပ်က အောက်က …
ကျုပ် အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ကတော့ … တရားခံ အုတ်ကထဂျီးဘဲ … ဟွန်း …
အန်တီမမကော မတွေ့ပါလား မလာဘူးလားဟင်…
သတိရတယ် လာချင်တယ်။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ မလာဖြစ်ခဲ့တာပါ အမှတ်တရ အင်္ကျီတော့ လိုချင်မိသား…
ဒီတစ်ခါတော့ လူအတော်စုံတယ်နော်။ ပျော်စရာကြီးပဲ မြင်တွေ့ရတာ။
မနောတွက် အကျီင်္အန်တီံဆီမှာ ယူလို့ရပါတယ်။ချန်ထားပါတယ်။
စုံထောက် ကမြင့်ကျော် ကိုရော ဖိတ်ထားသေးလားး။
အဝေးကသာ လွမ်း။ ငမ်း။ မျှော် ရပါသည်။
.ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ဖို့၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု အဓွန့်ရှည်ဖို့ ဆိုတာက စာပေသမားချည်းပဲလည်း မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေ။ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေရဲ့ ကျားကန်ပေးမှုကလည်း လိုအပ်တာကိုး။ သဂျီးတောင်ပြောသေးတာပဲ။ နောင်တက်မယ့်အစိုးရနဲ့ ခရိုနီ ပူးပေါင်းမှုဆိုလား။ ဂဇက်အဖွဲ့ အဓွန့်ရှည်ဖို့ဆိုတာ အနုပညာသမားချည်းပဲ မဖြစ်နိုင်သေး။ ရွာ့သူဌေးတွေ ၀ိုင်းပေးပါမှ ဖြစ်မှာ။
ဒီတခေါက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ + တွေ ပိုများလာတာ ၀မ်းသာစရာပဲ။
၀မ်းနည်းစရာကတော့ အရင်တခေါက်တုန်းက + ပါလာနိုင်တဲ့ မောင်ဆောရီး
အဲ … မှားလို့
မောင်ဆောရိုး တစ်ဦးတည်း ပွဲတက်လာတာပဲ။
သတိတရမေးတဲ့ မနောကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ရွာသူားတွေနဲ့ မတွေ့လိုက်ရတာထက် မဲမနှိုက်တာ စိတ်နာတယ် လို့ မထင်ပါနဲ့။
.တကယ်တော့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့စာရင်းက ရွှေတိုက်ဆီမှာ
.ကုန်ကျစရိတ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ၀ိုင်းထည့်ကြပေါ့
နှောင်နှစ်ကိုလဲ ခုလိုပဲ ………တွေ့ဆုံစေချင်ပါတယ်…….
ချာတူးဂွမ်က အပြင်မှာတော့ အရမ်းခင်ဖို့ကောင်းထယ်။
အပြင်မှာ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံနဲ့ တူတယ်လို့
(ဂွစ်ဂွစ်ဆိုတာကို ဘသူမှ မပြောခင် အရင်ဦးအောင် ပျောသွားတယ်)
-အမျင်ကျီဖို့~ မျောက်မှန်လိုရင်~ ယူနိုင်တက်ဘေးရှင်းချိဒယ်~
-နာ့အရပ်အမောင်းက 166cm ရှိဒယ်နော် အချားတူဇယာမချိတော့လို့လားဟမ်
ကျော်ရယ်အလင်းဆက် ကိုရေမြေ့ သနင်း ကိုတိမ်မည်း ကိုအောင်မိုးသူ ဟုတ်တယ်
ချားတူးဂွမ်က ဂွမ်းပုံနဲ့ တူပါဘူး
သူခေါ်လာတဲ့ သူညမကမှဟေမာမန်းဝင်းနဲ့ အတော်တူတာပါ
မှီ ကလဲ ထွန်းအိဒ္နြာဘို နဲ့ တူသလားလို့။ :))
အန်တီမှီ ဆုယူနေတုန်းကတောင်…ကိုမိုးမင်းသားကို ပြောမိသေး..
အန်တီမှီ က….မခိုင်ကြီးနဲ့ တူတယ်နော်..လို့..
good, လူတိုင်းတက်လို့ရလားဗျ ၊ ရန်ကုန် ရောက်ရင် နောက်ပွဲတွေတက်ချင်လို့ပါး)
.ရပါသော်ကော awra-cho ရေ….ဖိတ်ကတည်းက ရွာမန်ဘာမှန်သမျှ ကိုဖိတ်တာပါ
တွေ့ဆုံပွဲနေ့က ကျနော် ပြန်တဲ့ နေ့ ဖြစ်သွားတော့ မတက်လိုက်ရဘူး
အကျီင်္လေးတောင် မှာထားပြီး မြို့ထဲ မသွားဖြစ်လို့ မယူလိုက်ရတဲ့ ဘွကြီးပါ ဗျာ…..
နောက်တစ်ခေါက် ပေါ့လေး)